Apple waxay ku iibinaysaa Qalabka iMac Pro ee Gray Space | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu sii daayaa qalabka iMac Pro ee cawl bannaan
Apple waxay ugu dambayntii iibisay noocyada cusub ee kaabayaasha ah oo ilaa imika uun heerkoodu yahay markay iibsanayaan iMac Pro oo, sidaad horeba u ogayd, loo soo saaray markii ugu horreysay ee aluminium cirro leh. Markii iMac Pro cusub la iibiyay waxaan wada ogaanay sida dadka Cupertino ay u abuureen nooc cusub oo ah Keyboard Magic oo leh keypad tiro cirro leh, Magic Mouse oo leh dusha madow iyo aluminium cirro leh oo bannaan iyo Magic Trackpad leh muraayad madow iyo aluminium cirro leh
Haddii aan wax yar ka baaraandegno webka, waxaan arki karnaa xaraashka ka mid ah aagagga qalabka cawlan ee eBay tiro aad u sarreeya, oo laga bilaabo maanta la joojin doono.
Apple wuxuu durbadiiba bilaabay inuu iibiyo noocyada cusub ee cawlka ah ee qalabka kaabayaasha ee heerka la yimid cusub iMac Pro. Kuwani waa noocyo ku jira cirro iyo aluminium madow oo siinaya muuqaal aad u fiican. Waa kumbiyuutarradii ugu horreeyay ee noocan ah oo leh furayaal madow sida aan ka arki karno kombuyuutarrada gacanta.
Ilaa hada, iMac waxaa lagu sameeyay kaliya aluminium lacag ah iyo sidoo kale qalabkiisa ku jira qalinka iyo aluminium cad. IMac Pro wuxuu doortey cirro bannaan oo dhammaantood ah, isagoo kumbuyuutarka siinaya muuqaal PRO ka badan oo gebi ahaanba ka soocaya moodooyinka intiisa kale. Sida qiimahoodu, ma aha mid xad dhaaf ah laakiin way ka sarreeysaa tan noocyada aluminium ee cad iyo qalinka ah. Kala duwanaanshuhu wuxuu u dhexeeyaa 20 illaa 30 euro iyadoo ku xiran qalabka marka la barbar dhigo noocyada kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Apple wuxuu sii daayaa qalabka iMac Pro ee cawl bannaan
Runtu waxay tahay in kumbuyuutarku aad u qurux badan yahay uguna qurux badan yahay midabkan.
Apple wuxuu soo bandhigayaa Xargaha Apple Watch cusub ee Guga 2018
Codsiga Fasalka wuxuu imanayaa Mac, iyo sidoo kale qeyb cusub oo codsiyada waxbarashada ah